Iyini amathuluzi angamagama angukhiye ama-Amazon best?
Ukwenza imikhiqizo yakho ibonakale ekusesheni kwe-Amazon, udinga ukwandisa uhlu lwakho. Esinye sezinto eziphawulekayo zokuthuthukisa i-search keyword. Udinga ukuqonda okuyisisekelo sale nqubo ukuthuthukisa izinga lemikhiqizo yakho.
ucwaningo lwegama elingukhiye lubonisa imibuzo yangempela yokusesha kanye nemigomo yokusesha ukuthi amakhasimende akho angasebenzisa ukuthola imikhiqizo yakho. Le nqubo iyadingeka kubathengisi base-Amazon njengoba kubasiza ukuba bathole imigomo yokucinga ehambisanayo ngaphakathi kwemikhiqizo yabo noma emakethe yemakethe. Lawa magama angukhiye ahlobene nawo abanika ithuba lokuthuthukisa izinga lemikhiqizo yabo nokuthuthukisa imali yonke yebhizinisi.
Amanye amathuluzi okucwaninga e-inthanethi ahlinzeka ngeziphakamiso zokusesha ezingasetshenziselwa ukwandisa ucwaningo lwegama elingukhiye oluqhubekayo. Kunzima ukuhlukanisa ithuluzi lokucwaninga legama elingukhiye le-Amazon, kodwa okuphumelela kunazo zonke kubandakanya i-Google Keyword Planner, i-Keywordtool.io, ne-Semalt Amazon SEO. Lawa mathuluzi angakunika ukucwaninga kwegama elingukhiye eliphelele kanye nokulandela ukulandela okuthunyelwe kwamagama angukhiye.
Ungathola kanjani amagama angukhiye ahloswe kakhulu futhi uthuthukise imikhiqizo yakho?
Amathuluzi amaningi okusikisela okubhaliwe nge-inthanethi asebenza ngendlela efanayo. Okokuqala, udinga ukufaka igama lakho lokusesha inzalo ebhokisini lokusikisela losesho bese uchofoza "qala ukucinga." Njengomthetho, emva kwalokho, uzoqala ukuthola amagama angukhiye afanelekile ngokusekelwe ku-Amazon amacebiso. Ungakwazi ukuhlunga amagama akho angukhiye bese ushiya kuphela okubaluleke kakhulu embonini yakho. Kunemisebenzi eminingi enisiza ukusula usesho lwakho. Uma usanda kusungula ibhizinisi lakho le-intanethi, kunengqondo ukusebenzisa amagama angukhiye omdala kuqala ngoba bayokunika ithuba lokufinyelela ama-Amazon SERP aphezulu kakhulu.
Uma usufumene uhlu lwamagama angukhiye ebhizinisi lakho, udinga ukuya ekhasini lokulandela umkhiqizo bese wengeza amagama akho okusesha. Amagama angukhiye wokulandelela aqala ngokuzenzekelayo uma ungeze amagama akho okucinga okubhekiswe ohlelweni. Ithuluzi lokulandelela i-Amazon lizokunikeza izibuyekezo zokubeka njalo ngokulandelela izikhundla zakho zamagama angukhiye zamanje. Lolu lwazi luzokusiza ukuba ube yisinyathelo ngaphambi komncintiswano wakho. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukuhlola lapho imikhiqizo yakho ifaka khona khona.
Nokho, yingxenye yenkinga ukuthola ukusikisela kwamagama angukhiye; udinga futhi ukuthuthukisa isikhundla sabo. Yingakho kufanele usebenzise amagama akho angukhiye ahlosiwe ngokuyisisekelo. Okokuqala, udinga ukwandisa isihloko sakho nencazelo ngokuzakhela ngokucophelela imigomo yakho yokusesha efanelekile. Ngaphezu kwalokho, udinga ukudala ama-URL angasebenzisa umsebenzisi ngaphandle kwegama lakho lomkhiqizo negama elingukhiye elihlosiwe. Wonke la macebo okusebenza ngendlela eyinkimbinkimbi iyoba nomthelela omuhle ekubaleni kwegama lakho elingukhiye le-Amazon futhi uthuthukise ukuqashelwa komkhiqizo wakho phakathi kwamakhasimende akho angahle.
Ngaphezu kwalokho, ukunakwa okumele kuhokhwe kuhlu lwakho. Udinga ukuhlinzeka ukusesha kanye ne-Amazon bots ngolwazi olufanele kakhulu mayelana nezinzuzo zomkhiqizo wakho nezici. Yingakho kufanele ugcwalise wonke amasimu ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho angase athole izimpendulo kuzo zonke imibuzo engenzeka ukuthi zingase zibe nazo Source .